▷ Ezona Ndlela ZIMAHLA zaMAHHALA zokufumana i-InstaSize-Usetyenziso lwe-2021 | Izikhokelo ze-Android
Eyona ndlela ilunge ngakumbi yokuFezekisa simahla
UCarlos Valiente | 28/11/2019 10:04 | IiApple zeApple
Sithanda ukufota yonke into eyenzekayo macala onke kuthi, Thatha iifoto zezona zihlandlo zibalaseleyo kwaye uzilayishe kunxibelelwano lwasentlalweni. Kananjalo namhlanje ii-smartphones zineekhamera ezifakwe ngee-sensors kunye neelensi ezikumgangatho omangalisayo.
Kungenxa yoko le nto sifuna ukubonisa nokurekhodisha izilwanyana zasekhaya, izihlobo kunye nosapho, sizenze ezo ntyatyambo zintle zemacros okanye iikholaji kunye ulayishe kwiinethiwekhi zentlalo ezinjenge-Instagram, iifoto kunye nevidiyo emfutshane yesicelo ngokugqwesa.
Ezona zokusebenza zilungileyo zokwenza iikholaji zeefoto
Kodwa sithanda iifoto zethu ukuba zinomgangatho wokuchukumisa, kwaye bagqibelele. Ukwenza oku sisebenzisa izicelo ezihlela kunye nokufaka iifoto kwimfezeko, Ukunika iziphumo phantse zobungcali.
Esona sicelo sisetyenzisiweyo I-InstaSize-Umhleli wePhoto kunye noMdali iikholaji.
Ncedisa uMhleli weFoto kunye neKholeji
Umthuthukisi: Yongeza, Inc.
Esi sicelo ujongano olulula nolunomdla Ngepaneli yeqhosha elisezantsi enamaqhosha amahlanu okwenza ikholaji, unokukhetha umfanekiso okanye uninzi kwigalari okanye ubenze kwikhamera, kwaye usebenzise imvelaphi kunye nemaleko.
Ivumela umsebenzisi ukuba afake iifoto kwi-Instagram, kwifomathi ethe tye okanye ethe nkqo, enkosi kwizakhelo ezimhlophe azongeza kwifoto, ngaphandle kwesidingo sokuyityala ukuze akwazi ukuyipapasha iphelele.
Namhlanje, sisicelo esingasasebenziyo ngenxa yezizathu ezahlukeneyo, kodwa esona sizathu kukuba Ihlawulwe emva kwenyanga yokuqala yokusetyenziswa.
Kufuneka sifunde kuphela amagqabantshintshi omsebenzisi awunika amanqaku awoyikisayo, sishiya amanqaku aso onke eenkwenkwezi ezi-3,7 kuphela ngesi sizathu, kuba ayivumeli nokuyivavanya ngaphandle kokuzisa indlela yokubhatala, masihambe siyokuyithenga okanye hayi .
Ke ngoko, siza kuthetha ngezinye izicelo zasimahla kunye nezixhobo ezinemisebenzi efanayo kwaye ungazithanda nangaphezulu kwale InstaSize, esithetha ngayo.
1 Ezinye iindlela zasimahla zokufaka kwi-InstaSize
1.1 Isikwere ngokukhawuleza
3 Umoya womoya
4 InShot -Vidiyo kunye noMhleli weFoto
Ezinye iindlela zasimahla zokufaka kwi-InstaSize
Umthuthukisi: UMenzi weKhonkco ngokukhawuleza kunye noMyili weKhola
Sisicelo esingafakwanga malunga nokukhutshelwa okungama-4,8 kwiVenkile yokudlala, kodwa inenqanaba le-XNUMX ke kuya kufuneka sinikele ingqalelo kuyo.
Isikwere ngokukhawuleza ikuvumela ukuba uthumele iifoto kwi-Instagram okanye kwi-Instagram Story nge-emojis kunye nezinye izitikha. Unokwenza imifanekiso ethe tyaba njenge-InstaSize usebenzisa indawo eyakhelweyo ngaphakathi "ngaphandle kwesityalo" ukuba ukhetha isitayile sebhokisi yakudala ye-Instagram.
Ine-cAmakhulu ee-emojis kunye nezincamathelisi que baya kuyenza imifanekiso yakho kunye neeselfie thetha ngakumbi nokubetha, njengoko kubonisiwe ngabenzi besicelo.
Sinokuqaqambisa iimpawu ezinje nge izitikha ezingenakubalwa kunye nee-emojis iyafumaneka ukwenza ifoto yakho ibe nobugcisa ngakumbi. Yongeza isicatshulwa ukwenza i-caption yakho, iziphumo ezinje nge-blur, gradient, mosaic okanye imibala yangemva.
Ungabelana ngeefoto zakho nakweyiphi na inethiwekhi yoluntu, kubandakanya i-Instagram, i-Twitter, i-Facebook, i-WhatsApp kunye ne-Snapchat.
Umhleli Wezithombe ukuvumela ukuba uthathe iifoto ezikumgangatho ophezulu ezinemvelaphi engacacanga, evelisa isiphumo bokeh kuthatha ntoni ngoku, unokuyila isicatshulwa kwiifoto zakho, kwaye uzenze zahluke.
Ngamafutshane, yeyona ndlela ilungileyo yokwenza izihluzi, izitikha, iziphumo kunye nokusikwa kweefoto, eziza kukunceda uqokelele "ukuthanda" okungakumbi kuzo zonke iimpapasho zakho.
Umthuthukisi: Cinga iLebhu
Ngoku siza kuthetha ngale sicelo esisici sayo esiphambili yile ungayisebenzisa ngaphandle kokufikelela kwi-Wi-Fi okanye idatha. Sinee-retouching zokufota kunye nokukhetha ukwenza ukuya kuthi ga kwizigidi ezibini zokudityaniswa kweziphumo ngaphandle konxibelelwano lwe-Intanethi.
Esi sicelo sinokukhutshelwa okungaphezulu kwesigidi kunye nenqanaba leenkwenkwezi ze4,4 kwiVenkile yokuDlala, ke ngoko kufanelekile ukuba inikwe indawo kwii-smartphones zethu kwaye ifunde ukusetyenziswa kwayo, kunye namaqhinga asinika wona.
Ukongeza ekuzinikezeleni retouch iifotoIsicelo sisinika imisebenzi efana ne ukwenza iikholaji, usebenzisa iitemplate ezichazwe kwangaphambili, kwaye ine umsebenzi wekhamera odibeneyo, apho unokufaka khona imifanekiso ngaphambi kokuyihlela, kwaye konke ngaphandle kokushiya iapp.
Eyona ndlela ingcono yasimahla yePicsArt
Kanye ecaleni kwekhamera yekhamera kwisikrini esikhulu sesicelo, uya kufumana indlela emfutshane "kwiifoto". Ukusuka apha, sinako khetha umfanekiso kwigalari ukuze uphinde uwenze kwakhona kumhleli weapp.
Inye into ekufuneka uyigcine engqondweni yile I-Pixlr ayikuvumeli ukuba uhlele imifanekiso emininzi ngaxeshanye, umzekelo, ukongeza i-watermark okanye ukuphinda ubeke ubungakanani kwakhona kwiifoto ezininzi ngokukhawuleza.
Njengoko ubona kukho uluhlu olude lwezinto onokukhetha kuzo ukuze wabelane ngeefoto zakho ngokuthe ngqo nabahlobo bakho kwi-Instagram, Facebook, Twitter okanye nge-imeyile.
I-AirBrush -Ikhamera yeFoto yePR
Umthuthukisi: I-PIXOCIAL TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD.
Ukuba into yakho kukupapasha i-selfies esi sisicelo sakho. Inenani elikhulu lemisebenzi, nangona eminye yayo ivuliwe ngokufikelela kuhlobo oluhlawulelweyo.
Sinokuba neendlela zokwenza izinto, izihluzi kunye nohlengahlengiso lomntu ngamnye njengetoni yolusu okanye ukukhanya kwamehlo, kodwa kunye nemowudi ezenzekelayo onokuyithanda kancinci, kuba ngamanye amaxesha iya kude kakhulu.
Nangona kunjalo, njengoko besitshilo kwisicelo esibonakalayo ngokwaso, sinokuthatha iifoto ngokusebenzisa iziphumo zokuphinda ubambe ngokuzenzekelayo, nangona kunjalo sinokuhlela iifoto kamva.
Enye yeenzuzo ze-AirBrush kukuba sisixhobo somlingo, enkosi apho sinokufaka khona iziphumo ezininzi ngaxeshanye, ngokuchaphazela nje omnye. Ngoku, singazisebenzisa zonke izixhobo zayo ngesandla, ngeendlela ezinjengamhlophe mhlophe, ukukhulisa amehlo, ukunciphisa izidlele, ukuhambisa isikhumba, nokunye okuninzi.
Nje ukuba sigqibe ukusebenza neefoto zethu, kuya kufuneka sizigcine kwimemori yesiphelo. Njengesiqhelo, sinokwabelana ngokukhawuleza ngayo nayiphi na inethiwekhi yethu esiyifakileyo.
I-AirBrush sisicelo esihle sokuhlela iifoto, esinezixhobo ezininzi eziluncedo kakhulu, kwaye inikezela ngonxibelelwano olufikelelekayo. Isicelo senzelwe ngokukodwa ukuphinda sisebenzise 'iiselfie', kodwa sinokuhlela nayiphi na ifoto kwigalari yethu, kwaye ngokwenza kancinci baya kujongeka.
InShot -Vidiyo kunye noMhleli weFoto
Ividiyo kunye noMhleli weMifanekiso yoMculo -InShot
Umthuthukisi: InShot Vidiyo yoMhleli
Nguye umhleli wevidiyo kunye neefoto Ngomnye wamanqaku aphezulu kuloluhlu, unamanqaku aphakathi kwe-4,8.
Ungahlela iividiyo zakho ngomculo, wenze indalo entsha, usike kwaye udibanise iividiyo ezahlukeneyo, kwaye udibanise umbhalo kubo.
Eyona nto imnandi kukukhetha ukuguqula isantya senguqulelo seevidiyo, Sinokufaka isicelo sokuhamba kancinci okanye okukhawulezayo, ngaphandle kwesidingo sokuba isiphelo sethu sibe naloo khetho, into enokwenza iividiyo zakho zibe mnandi kwaye zinike umdla.
Kwakhona unokufaka iifilitha, ukusika, okanye ukongeza isicatshulwa. Ukusetyenziswa kwayo kulula, kufuneka ukongeza iividiyo ofuna ukuzihlela. Ngenxa yoko kufuneka ucinezele uphawu lokudibanisa (+). Nje ukuba kwenziwe, unganqakraza kwisikere icon ukususa iziqwenga ezingafunekiyo.
Njengoko besitshilo, iapps inika ithuba lokongeza isicatshulwa, yeyiphi Unokwenza ngokwezifiso zombini uhlobo lwefonti kunye nobungakanani, nkqu nombala.
Kukho ithuba lokufaka izitikha kwiindawo ezahlukeneyo zekliphu. Unoluhlu lwazo olufumaneka kwisicelo esinye, kodwa ukuba awuzithandi okanye zibonakala ngathi azonelanga, ungathenga iipakeji ezahlukeneyo zesitikha.
Olunye ukhetho esinalo kukufaka iifoto onazo kwi-smartphone yakho, umzekelo, ukuzibandakanya kwisiqwengana sevidiyo kwaye ke ukongeza ukubamba okukhethekileyo kulungelelwaniso lwakho. Unokujikeleza ikliphu okanye uyijikeleze ukuze utshintshe umbono.
Ngamafutshane, yonke into onokucinga ngayo ngengcinga encinci kunye nexesha liya kukuvumela ukuba ufumane iziphumo zomgangatho omangalisayo.
Yiyo kwezona zicelo zibalaseleyo zokufakwa kwifoto kwakhona, injongo yayo ayikho enye ngaphandle kokuhlela ifoto. Ngokuziqhelanisa okuncinci nokwazi ukusebenzisa inani lezixhobo kunye nezinto onokukhetha kuzo, unokufikelela kwiziphumo zobungcali eziya kothusa wonke umntu.
Amaqhinga ama-8 ongawaziyo ukusebenzisa i-Snapseed
I-Snapseed sisicelo esinomdla, kunye neemenyu ezilungelelaniswe kakuhle. Ukulawula ubungakanani bohlengahlengiso kunye neziphumo esizisebenzisa ekufotweni kwethu, singahambisa umnwe wethu kwiscreen ngasekhohlo kwaye sinciphise amandla ayo, ukuba ngokuchaseneyo siyisa ngasekunene siya kuyonyusa. Njengokhetho lwesithathu, ukuba utyibilika umnwe ucinezela phezulu okanye ezantsi, uya kuba nakho ukubona iimenyu ezahlukeneyo zesixhobo esisisebenzisayo ngalo mzuzu.
Ngakolunye uhlangothi, Ukuba ufuna ukubona utshintsho olwenzileyo ngokubhekisele kwifoto yoqobo, ungakwenza oko ngokucinezela i-ayikhoni imilo yesikwere esahlulwe kabini, okanye ucinezele kumfanekiso ngokwawo ukuze uwubone.
Sijongene nesicelo esenziwe nguGoogle, ke umgangatho wayo kunye namathuba asinika wona ngaphandle kwamathandabuzo. Ndikucebisa ukuba ujonge izifundo kwi-Intanethi nakwiYouTube ukuze ufunde indlela yokufumana okuninzi kuyo, kuba sesinye sezixhobo ezilungileyo esinazo kwihlabathi lokuhlela iifoto.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izikhokelo ze-Android » IiApple zeApple » Eyona ndlela ilunge ngakumbi yokuFezekisa simahla
Eyona midlalo ilungileyo yokulwa i-Android
Uyilungisa njani ibhetri eyonakeleyo yeselfowuni yakho